China Wholesale Chinese Chigadzirwa Chinoumbwa Muchinjikwa Arm Arm Insulator Mugadziri uye mutengesi | Nhoroondo
Wholesale Chinese Chigadzirwa Chinoumbwa Muchinjikwa Arm Insulator
Izvo zvigadzirwa zvemuchinjikwa zvinodzivirira zvinowanzo kuve zvemagetsi porcelain uye zvinhu zvinoumbwa. Iyo yemagetsi porcelain crossarm insulator chidimbu chevhu chakaumbwa sedanda. Isa padanda kutsigira waya.IYO INOSHANDA semufambisi wekuvhara pasi. Uye kutamba iro basa remuchinjiko - ruoko.
Wholesale Chinese Chigadzirwa Chinosanganisira Muchinjikwa Arm Insulator
4.Iye arcing corona mhete inogovera musango wemagetsi padhuze neiyo insulator demo kudzivirira corona phenomenon uye chengetedza iyo insulator kubva kune inorema kukuvara pakupedzisira kuguma kana flashover.
1.Iyo goridhe yekupedzisira musoro inotora iyo maze dhizaini musimboti, yakawanda-dura dziviriro, uye yakanaka yekuisa chisimbiso mashandiro, ayo anogadzirisa rakanyanya kunetsa dambudziko revasisitiri-interface magetsi kuparara.
2.Iyo tsvimbo yepakati inotora ERC yakakwira-tembiricha acid inodzivirira tsvimbo, uye iyo yepakati tsvimbo uye Silicone rabha interface inoputirwa neakasarudzika coupling mumiririri.
3.Imburera sleeve inotora imwe-nguva yakazara kuumbwa kwemaitiro pasi pekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya, uye inowirirana nekombuta yekutarisa yechipiri chikamu chemakemikari maitiro, ayo anowedzera hupenyu hwebasa hwechigadzirwa.
4.Kubatana pakati pechishandiswa chegoridhe uye tsvimbo yepakati inodzorwa nekombuta uye inoshongedzerwa neakazara-otomatiki acoustic emission detection system yekuona kudzikama uye kugadzikana kwekubatana pakati pechishandiswa chegoridhe netsvimbo yepakati.
Insulation michina yakaiswa pakati pevatyairi veakasiyana mikana kana pakati pevatyairi uye pasi nhengo dzinogona kumira mamhepo uye zvemagetsi kushushikana.Iyo yakasarudzika mhando yekudzivirira kudzora uye inogona kutora chinzvimbo chakakosha mumusoro wekutenderera mitsara.
Pashure: Kudonhedza Kucheka Kwakakwira Voltage Komputa Fuse
Zvadaro: Yakakwira Voltage Magetsi Composite Strain pini Insulator